Nagu saabsan - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Isha: Warbixinta Saamaynta 2021
Ku saabsan Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Sadler Health Centre waa xarun caafimaad oo heer federaal ah oo u adeegta degmooyinka Cumberland iyo Perry, oo bixisa daryeelka aasaasiga ah ee bulshada ku saleysan, daryeelka ilkaha iyo adeegyada caafimaadka dabeecadda oo ay la socdaan koox xirfadlayaal ah oo kaa caawin kara inaad gaarto noloshaada ugu caafimaadka badan.
U adeegida bukaanada adiga oo kale ah, waxaanu caafimaadka bulshadeena ka dhignaa udub dhexaadka wax kasta oo aanu samayno. Xaruntaada daryeelka ahaan, kooxdayadu waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiyaan inaad ku xidho agabka iyo taageerada, xataa wixii ka baxsan xaruntayada.
Waxaan ku dadaaleynaa inaan bixino daryeel caafimaad oo la heli karo oo la awoodi karo. Tani waxay ka dhigan tahay inaan u adeegno qof walba, oo ay ku jiraan bukaanada aan caymis qabin, aan caymis ku jirin ama haysta caymis ay dawladdu kafaalo-qaaddo sida Medicaid ama CHIP.
Waxaan aaminsanahay in berri ka caafimaad badan uu ku bilaabo daryeel iyo taageero ka wanaagsan maanta.
Sheekada Xarunta Caafimaadka Sadler waa sheeko bulsho oo isu timid si ay wax uga qabato kala duwanaanshaha caafimaad ee ay la kulmaan dadka ugu liita iyo kuwa nugul ee bulshadeena. Sannadkii 1921-kii, Guddiga Daryeelka ee Naadiga Madaniga ah ee Carlisle waxay caddeeyeen baahida loo qabo xarun caafimaad si loogu adeego “dhammaan carruurta nafaqo-xumada hayso ama aan taxadar lahayn ama si kasta oo u baahan talo ama daryeel dhakhtar.” Furitaanka rugta caafimaadku waxay ahayd bilawga dhaqdhaqaaq iskaashi oo socda si loo horumariyo caafimaadka bulshada Carlisle.
Ka dib 30 sano oo ay kormeerayeen Naadiga Madaniga ah ee Carlisle, barnaamijka caafimaadka, oo hadda ku jira Ururka Kalkaalisada Booqashada iyo sidoo kale Xarunta Caafimaadka Carruurta, ayaa loo wareejiyay Isbitaalka Carlisle waxaana lagu maalgeliyay kalsoonida uu abuuray Dr. Horace T. Sadler.
Xarunta Daryeelka Sadler ayaa laga furay magaalada hoose ee Carlisle ee dhismihii hore ee JC Penney, 117 N. Hanover St., Janaayo 31, 1984. Iyadoo lagu dhisayo taariikhdeeda wada shaqayneed, xaruntu waxay sidoo kale siisay boos rugta caafimaadka, xafiisyada kalkaaliyayaasha daryeelka guriga, Xarunta Caafimaadka Carruurta, iyo Life Wise. Qoyska iyo Adeegyada Carruurta; Ururka Kansarka Maraykanka; Waddada Midaysan ee Aagga Carlisle Weyn; iyo Daryeelka Caafimaadka Guriga ee Maraykanka ayaa sidoo kale la dejiyay dhismaha.
Markii Carlisle Hospital la iibiyey 2001, waxaa la isku raacay in Xarunta Daryeelku ay u sii ahaan doonto xarun caafimaad oo loogu talagalay dadka aan caymiska lahayn ee ku nool badhtamaha magaalada Carlisle muddo laba sano ah. Waqtigaas, Aasaaska Caafimaadka iyo Fayo-qabka ee Deegaanka Carlisle, oo hadda loo yaqaan Partnership for Better Health, ayaa abuurtay koox hawleed si ay u sahamiyaan mustaqbalka Xarunta Daryeelka Sadler. Kooxda Hawsha waxay ku taliyeen in la sameeyo shirkad cusub oo aan faa’iido doon ahayn si ay ula wareegto hawlaha Xarunta Daryeelka ee Sadler.
Guddiga Agaasimayaasha ee beesha ku saleysan ayaa la wareegay mas’uuliyadda Xarunta Caafimaadka ee Sadler, oo si rasmi ah loogu daray Oktoobar 25, 2002, oo bilaabay hawlgal Juun 19, 2003. Bishii Febraayo 2004, xaruntu waxay u guurtay xarun cusub oo la cusboonaysiiyay oo ku taal 100 N. Hanover St. ee Carlisle. Sadler Health Centre waxa loo aqoonsaday inay tahay xarun caafimaad oo heer federaal ah oo u eeg 2005 iyo xarun caafimaad oo heer federaal ah 2015.
Hadafka Guddiga Samafalka Naadiga Madaniga ah ee Carlisle ee 1921 wali waa mid khuseeya maanta sidii ay markaas ahayd. Xarunta caafimaadka ee Sadler waligeed ma lumin hadafkeeda ama bilawgeeda hoosudhaca ah. Waxaan sii wadeynaa in aan sii wadno in aan u wada shaqeyno si wada jir ah si aan wax uga qabano kala duwanaanshaha caafimaadka bulshadeena, qof walbana waa lagu soo dhaweynayaa Xarunta Caafimaadka ee Sadler.
Sadler Health Centre waa qaataha Abaalmarinta Horumarinta Tayada ee Kheyraadka iyo Maamulka Adeegyada (HRSA), oo la siiyo xarumaha caafimaadka ee ay maalgeliso HRSA ee buuxiyey ama dhaaftay cabbirrada hagaajinta tayada.
Xarunta waxa kale oo ay u aqoonsan tahay Guddiga Qaran ee Xaqiijinta Tayada sida Guri Caafimaad oo Bukaan-xaruneedkiisu yahay Heerka 3, si loo isticmaalo caddaynta ku salaysan, hababka bukaan-socodka ee diiradda saaraya daryeelka aadka loo agaasimay iyo xiriirka muddada dheer, ka qaybqaadashada.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Nagu saabsan